Puntland ayaa qoraalkan ka soo saartay Xaaladda maanta iyo xalay ee Muqdisho. – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Puntland ayaa qoraalkan ka soo saartay Xaaladda maanta iyo xalay ee Muqdisho.
Puntland ayaa qoraalkan ka soo saartay Xaaladda maanta iyo xalay ee Muqdisho.
Dowlada Puntland waxa ay isha ku haysay waxa ka dhacayay xalay saqdii dhexe iyo Saaka aroortii Magaaladda Muqdisho, waxaa wax laga xumaado ah in iyadoo la sugaayo doorasho ka dhacda Dalka ay timaado falal abuuri kara qalalaaso iyo xasilooni daro ka aloosanta dalka oo weliba ay qayb ka noqdaan ciidamada qalabka sida ee loo diyaariyey in ay dhowraan karaamada iyo sharafta muwaadinka Soomaaliyeed.
Previous articleSida uu Nebigeennu (SCW) u isticmaalay xisaabta markii uu galayay dagaalkii Badar?
Next articleDowlada Soomaaliya oo war ka soo saartay dagaal ka dhacay Muqdisho
Israel oo Weeraro iyo duqeyn ku sameysay Gaza oo geystey dhimasho...